Semalt विशेषज्ञले बताउँछ कि कुन Dan खतरनाक एसईओ गल्तीहरू तपाईंले त्याग्नु पर्दछ
यदि तपाईं वास्तवमै आफ्नो साइटको पदोन्नतीलाई सफल बनाउन चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि ढिलो देखिएको त्रुटिको लागत कति ठूलो हुन सक्छ। तर सबैले गल्ती गर्न सक्छन्, यसबाट कोही पनि मुक्त छैन।
SEO मा, त्यहाँ धेरै पोइन्टहरू छन्, जसको प्रवेशले नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ। यहाँसम्म कि अनुभवी पेशेवरहरूले गल्तीहरू गर्छन्, हामी ग्राहकहरू वा विशेषज्ञहरूको बारेमा के भन्न सक्छौं जुन केवल आफ्नो पेशागत क्यारियरको सुरूवातमा छन्।
हामीले जोगिन सब भन्दा साधारण एसईओ गल्तीहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौं, र हामी आशा गर्दछौं कि यस जानकारीले तपाईंको धेरै समय र पैसा बचाउनेछ।
लक्षित दर्शकहरूको गलतफहमी
केही राम्रो गर्नका लागि, तपाईंले यो को लागि गरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। लक्षित दर्शकहरूको आवश्यकता पूरा नगर्ने साइटले पर्याप्त नाफा लिने छैन, र यसको प्रबर्द्धनको बजेट वास्तवमा व्यर्थमा जान्छ।
तपाईं अवतरण पृष्ठ बनाउन सक्नुहुन्न जुन एक पेशेवर फोटोग्राफर र शुरुवातकर्ता दुवैको लागि पर्याप्त हो जसले पहिले उनीहरूको हातमा क्यामेरा लिएको थियो। तपाईं कसलाई सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नु A को लागि एक शर्त हो राम्रो रूपान्तरण दर।
यो दिमागमा राख्नुहोस् र विशालता बुझ्ने प्रयास गर्न सावधान हुनुहोस्। जब तपाइँ तपाइँको लागि सबै बहुमूल्य लक्षित श्रोताको एक विशिष्ट खण्डमा पुग्न तपाइँको सबै प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्नुहुन्छ, तपाइँको प्रयासहरूमा फिर्ताको सम्भावना परिमाणको क्रमले वृद्धि हुन्छ।
र खोज ईन्जिनहरूले आफैंले राम्रोसँग सिकेका छन् आशय र प्रयासका बीच भिन्नता गर्न अवतरण पृष्ठहरू अनुकूलन गर्नुहोस् धेरै खोजशब्दहरूको लागि, जुन सामान्यतया राम्रो परिणाम दिदैन।
शब्दार्थको साथ मैलो काम
यहाँ, धेरै जसो व्यक्तिले गरेका गल्ती यो हो कि तिनीहरू उच्च प्रतिस्पर्धाको साथ वास्तविक वास्तविक मागको गलत प्रवेशको साथ अपवादात्मक उच्च-फ्रिक्वेन्सी क्वेरीहरूको चयनबाट सुरू हुन्छन्, र यस्तै सिमेन्टिक कोरलाई बेवास्ता गर्दा।
राम्रो परिणामहरू पाउन तपाईंले महँगो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्दैन। त्यहाँ स्वतन्त्र उपकरणहरू जस्तै समर्पित SEO ड्यासबोर्ड, जसले तपाईंलाई चाँडै कुञ्जीहरूको चयन प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
कुञ्जी शब्दहरूको लागि खोज्नुहोस् जसका लागि प्रतिस्पर्धी साइटहरू क्रमबद्ध छन्। DSD उपकरणको साथ तपाईं कसरी यकिन गर्नुहुन्छ? हामीले लेखमा लेख्यौं "DSD बाट कसरी फाइदा पाउने"।
यो संग SEO उपकरण, तपाईं ती कीवर्डहरू स collect्कलन गर्न सक्नुहुनेछ जुन सब भन्दा बढी ट्राफिक सम्भावना हुन्छ र लेखहरूको लागि पूर्ण अपवित्र विषयहरू भेट्टाउन सक्दछ वा नयाँ अवतरण पृष्ठहरूका लागि अनुरोधहरूको समूह। र राम्रो पुरानो नियमको पालना गर्न सल्लाह दिइन्छ - एउटा पृष्ठ कुञ्जीहरूको समूहको लागि अनुकूलित हुनुपर्दछ जुन समान उद्देश्य छ।
एक्सचेन्जबाट बजेट लेख कहिलेकाँही केवल अप्रयुक्त मात्र हुन सक्छ, तर हानिकारक पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले "गुरु" को सल्लाह सुन्नुभयो र पाठको पानाहरू प्रकाशन गर्न सुरू गर्नुभयो भने, यो आशा छ कि यसले तपाईलाई ट्राफिकको बर्फबारी ल्याउनेछ।
पाठको भोल्युम निर्णायक कारक होइन, मुख्य बुँदा प्रयोगकर्ताको लागि यसको उपयोगिता हो। यसलाई बुझ्न असफलता स्प्याम/कम-गुणवत्ता सामग्री, उच्च बाउन्स र कम रूपान्तरण दरको लागि फिल्टरको रूपमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ।
खोज्दै एक पेशेवर व्यवसायी कसले सस्तो मूल्यमा तपाइँको लागि शान्त सामग्री सिर्जना गर्दछ अझै पनी एक चुनौती हो। यो कल्पना गर्न गाह्रो छ कि एक मालिक जो मर्मतमा विशेषज्ञ छन् उसले पनि काम पछि अर्डर गर्न लेखहरू लेख्दछ।
जे भए पनि, एक राम्रो लेखकको खोजीमा समय खर्च गर्नु उचित छ जसले कम से कम त्रुटिका साथ सभ्य सामग्री उत्पादन गर्दछ। र सम्पादकको सुधार र राम्रो डिजाईनले ट्रिक गर्नेछ।
"हामी दुई हप्ताका लागि प्रचार गर्दैछौं र अझै शीर्षमा छैनौं!" - शायद लगभग सबै अनुकूलक कम्तिमा एक पटक यस प्रकारका ग्राहकहरु लाई आयो, जसको लागि तपाइँले एकैचोटि सबै सेवा गर्नु पर्छ। मुख्य कुरा यो हो कि तपाईं आफैले तिनीहरू बीच हुनुहुन्न किनकि सबै कुरा द्रुत र सजीलोसँग मिल्दछ केवल परीकथामा।
SEO एक दीर्घ-अवधि खेल हो, र यदि तपाईंले तत्काल परिणामहरू अपेक्षा गर्नुभयो भने, तपाईं निराश हुनुहुनेछ। पनी प्रकाशन पछि उच्च-गुणको लेखले केहि हप्तामा ट्राफिक ल्याउन सुरू गर्दछ, र "पूर्ण कारोबार" पुग्न महिनौं लाग्छ।
यो दिमागमा राख्नुहोस् र आफ्ना अपेक्षाहरू बारे व्यावहारिक हुनुहोस्। यो कामको गतिमा पनि लागू हुन्छ - सबै चीज लिनको लागि प्रयास र एकैचोटि अनिवार्य रूपमा स्प्रेईंग र कम क्षमतामा जान्छ। बिस्तारै र योजना अनुसार सार्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको कती चाँडो दगुर्नु होईन, तर सहि दिशामा पनी।
अनौंठो, तर केहि कारणका लागि, हामी नियमित रूपमा यस्तो गल्ती एक कारकको श्रेष्ठतामा ईमान्दार विश्वासको रूपमा सामना गर्दछौं, जसको धक्काले आत्मविश्वासले साइटलाई सफलताको लागि नेतृत्व गर्न सक्छ। दुई मुख्य उदाहरणहरू: लेख एक्लो र आन्तरिक अप्टिमाइजेशनबाट बढेको आशा, र थोक लि buying्क खरीदको माध्यमबाट शीर्ष प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै। दुबै केसहरूमा अपेक्षित परिणाम केवल धेरै विरलै मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ।
साइट सम्भव भएसम्म विस्तृत रूपमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ, प्रतिस्पर्धीहरूले यसो नगरे पनि। आज यो छ, तर चाँडै नै सबै परिवर्तन हुन सक्दछ, र अधिक लगनशील नयाँहरू पुरानो टाइमरहरूलाई SERP बाट निल्नेछन्।
प्राविधिक पक्ष, आन्तरिक कारक, उपयोगिता र बाह्य लिंक द्रव्यमान - सबै चीज जटिल तरीकाले कार्य गर्नुपर्दछ।
मोबाइल SEO उपेक्षा गर्दै
मोबाइल दर्शकहरूलाई बढी ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई लामो समयदेखि छलफल गरिएको छ, र यो पक्ष आज महत्त्वपूर्ण हुनेछ। B2B कोठामा पनि, स्मार्टफोन र ट्याब्लेट प्रयोगकर्ताहरू पूरै श्रोताको आधा जति बनाउँछन्, हामी सामग्री परियोजनाहरूको बारेमा के भन्न सक्छौं?
र कल्पना गर्नुहोस् - त्यहाँ अझै पर्याप्त साइट मालिकहरू छन् जसले उत्तरदायी लेआउटमा स transition्क्रमणको ख्याल राखेका छैनन्, त्यस्ता मुद्दाहरूको लागि काम गर्ने कुरा उल्लेख नगरी लोड गति, फन्ट आकार र उच्च-गुणवत्ता मोबाइल अप्टिमाइजेसनको अन्य कम्पोनेन्टहरू।
रणनीति को अभाव
जे भए पनि तपाईले के र कसरी गर्ने भनेर राम्ररी बुझ्नुभयो भने, प्रक्रियाको निरन्तरता र चरणहरूको सही अनुक्रम सुनिश्चित गर्न राम्रो योजना अझै आवश्यक छ। कार्य रणनीतिले यसको विकासको लागि अनुमानित बजेट र दिशा निर्देशनहरू, कामको लागि योजना गरिएको समय, प्रकाशनको लागि योजना गरिएको सामग्रीको मात्रा, नयाँ सामग्री रिलीजको आवृत्ति र उनीहरूको वितरण च्यानलहरू, लि building्क निर्माणको गतिशीलता, इत्यादि समावेश गर्दछ।
अन्यथा, त्यहाँ समय र पैसा गुमाउने जोखिम मात्र हो, तर व्यापारको अवस्थामा पनि - हुनसक्छ प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा पछाडि पछाडि पछाडि। सुरुमा केही घण्टा खर्च गर्नाले शाब्दिक रूपमा भविष्यमा तपाईंको धेरै समय बचत गर्न सक्दछ।
यस्तो कागजातलाई धेरै विस्तृत बनाउन आवश्यक छैन, सामान्य बिन्दुहरूलाई रूपरेखा गर्न पर्याप्त छ, र प्रत्येक चरणको लागि निर्दिष्टहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको क्षणमा स्थगित गर्नुहोस्। यस्तो कामको मुख्य फाइदा भनेको कामलाई सकेसम्म सन्तुलित बनाउने क्षमता र क्षमताले नै गरेको प्रयासमा फिर्ती बढाउनु हो।
यदि तपाइँको साइट शीर्षमा छ भने, यो शैम्पेन खोल्नको लागि अझै राम्रो कारण होईन र राम्ररी हकदार आराममा जानुहोस्। प्रतिस्पर्धीहरू निन्दैनन्, र जो आफ्नो साइटको प्रबर्द्धन गर्न काम गर्न रोक्छन् सामान्यतया पहिलो वृद्धिमा स्थिरता आउँछ, र त्यसपछि एक ढिलो र स्थिर गिरावट।
पहिले नै उल्लेख गरिएको प्रतिस्पर्धाको अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य धेरै कारणहरू छन्:
खोजशब्दहरूको लागि खोजी मागमा क्रमिक कमी जुन अवस्थित पृष्ठहरू अनुकूलित छन्;
अनुरोध उद्देश्य वाणिज्यिकबाट जानकारीमा परिवर्तन गर्न;
कागजातहरूको खोजी परिणामहरूमा उपस्थिति जुन अधिक सान्दर्भिक छन् र समान खोज क्वेरीहरूलाई उत्तम जवाफहरू दिन्छन्;
खोजी ईन्जिनहरूले साइटमा अद्यावधिकहरूको लामो अनुपस्थिति रेकर्ड गर्दछ, जसले यसले उनीहरूको मनोवृत्तिलाई पनि असर गर्न सक्छ;
आन्तरिक कारकहरूको बाहेक, यो बाह्यलाई ध्यान दिएर लायक छ - लि mass्क द्रव्यमान समयको साथ कमजोर हुँदैछ केही लि off्कहरू खस्छन्, र केहीले कम तौल स्थानान्तरण गर्न सुरू गर्दछ।
यस सिक्काको दोस्रो पक्ष चाहिँ प्रभावको अभावको कारण प्रमोशनको पहिलो महिनामा एसईओ कार्यको रोकिने पृष्ठ हो। तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ कि आधुनिक अवस्थामा यो उपस्थितिमा स्थिर वृद्धि हासिल गर्न राम्रो छ महिना, वा अझ बढी लिन्छ। र मात्र एक जनाले लगानी फिर्ता गर्न थाल्नेछ भनेर आशा गर्न सक्दछ।
इन्टरनेट आत्मविश्वासका साथ ग्राहकहरु को मुख्य स्रोत बन्न गइरहेको छ ती उद्यमीहरु को लागी, जो धेरै वर्ष पहिले, किन उनीहरु लाई एक वेबसाइटको आवश्यकता छ भनेर पनि बुझ्न सकेनन्। यदि तपाईंले अहिले सम्म यो दिशातिर काम गर्न सुरू गर्नुभएको छैन भने, पहिले नै चाँडो गर्नु यो उच्च समय हो।
र तपाइँ एसईओ DSD उपकरणबाट मद्दत लिन सक्नुहुनेछ सुरुवातकर्ताको रूपमा गल्ती गर्नबाट रोक्नको लागि वा यदि तपाईं एक समर्थक हुनुहुन्छ भने पनि। यदि तपाईंसँग उपकरणको प्रयोगमा कुनै गडबडी छ भने, हाम्रो एक विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी २//7 समर्थन प्रदान गर्दछौं १ over भन्दा बढी फरक भाषाहरूमा। त्यसोभए, तपाईंको अनुरोध के हो, तपाईंको मातृभाषामा जे भए पनि, हाम्रो एक सहायक तपाईंको लागि उपलब्ध छ।
आशा छ, यो लेखले तपाईंलाई बाटोमा सामान्य गल्तीहरू रोक्न मद्दत गर्दछ, महान परिणामहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंको बकको लागि योग्य ब्यांग!